प्रभु र समृद्धि क्यापिटलले शुरू गरे एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । पूँजीबजारमा मर्चेन्ट बैंकरको रूपमा कार्यरत प्रभु क्यापिटल र समृद्धि क्यापिटल एक आपसमा गाभिएर ‘प्रभु क्यापिटल लिमिटेड’को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गरेका छन् । सोमवार एक कार्यक्रम आयोजना गरी दुबै संस्थाले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गरेको जानकारी दिए ।
मर्जरपश्चात् प्रभु क्यापिटलको अधिकृत पूँजी रू. १ अर्ब र चुक्तापूँजी रू. ८१ करोड ७१ लाख पुगेको छ । ठूलो आकारको पूँजीसहित अब बजारमा क्यापिटलले प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्ने मर्जर कमिटीका संयोजक समेत रहेका प्रभु क्यापिटलका अध्यक्ष बिनोद थकालीले बताए । पूँजीबजारको विकासलाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यसहित दुई संस्था आपसमा मर्ज भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले दुबै कम्पनी मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको उपलक्ष्यमा बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरे । नेपाली पूँजीबजारमा मर्जरपछिको प्रभु क्यापिटलले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी महŒवपूर्ण योगदान दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
यस्तै समृद्धि क्यापिटलका अध्यक्ष एलपी भानु शर्माले पूँजीबजार व्यक्ति मात्रै नभई समाज नै बन्ने मेलो भएको बताउँदै ठूला–ठूला संस्थाहरू सवल नभइ देश नबने जिकिर गरे । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियामकीय दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रभु गु्रपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले कोभिड–१९ को महामारीको कारण भएको आर्थिक मन्दीको वातावरणमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भिष्मराज ढुंगानाको कार्यकालमा नेपाली पूँजीबजारले विषम परिस्थिति भोगेको भए पनि परिस्कृत सेवाका कारण नयाँ उचाइ छुने विश्वास व्यक्त गरे ।